आमा र श्रीमतीबीचको झगडाले हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् समाधानका उपाय « Khabarhub
आमा र श्रीमतीबीचको झगडाले हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् समाधानका उपाय
विवाहपछि सबैभन्दा समस्या तपाईंकी पत्नी र आमाबीचको तनावपूर्ण अवस्थाले गर्दा उत्पन्न हुन्छ ।
विवाह भन्दा पहिला सामान्यता परिवारका सदस्यले भन्छन् कि ‘विवाह पछि आमालाई नबिर्सि ।’ कयौंपटक मानिसहरुले तपाईंको आमाको अगाडि पनि यस्तो भन्छन् । जसका कारण विवाहपछि दुई जनाबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने पिर पुरुषमा पर्ने गरेको छ ।
विवाह हुनासाथ तपाईको दिमागमा एउटा कुरा खेल्न थाल्छ । यदी तपाई आफ्नी नवविवाहित पत्नीसँग ५ मिनेट समय विताउँनुहुन्छ भने आमासँग १० मिनेट वा ५ मिनेट समय दिनुपर्नेछ ।
अधिकांश जसो पुरुष आफ्नी पत्नीको लडाइँको कारण पिसिएको महशुस गर्छन् । यदी तपाईको पत्नी र आमाबीच विवाद कायम रहेको खण्डमा परिवारमा कहिल्यै खुशि हुनेअवस्था बन्दैन । किनकी एक महिला उनको बाँकी जिन्दगीमा तपाईसँग रहन्छिन् र अर्की महिला जो तपाईको जीन्दगीमा रहिहन्छिन् ।
आमा र पत्नीलाई बराबरको महत्व दिन आवश्यक रहेको मान्यता आफैंमा गलत छ । आमा र पत्नीलाई एक तराजुमा राख्ने समाजको प्रयास पनि गलत छ । मानिस विवाहपछि महिलाको अगाडि आउने मुस्किललाई नजरअन्दाज गर्छन् । विवाहपछि युवतीको पूरै जिन्दगीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ, यस तर्फ मानिसले ध्यान नै पुर्‍याउँदैनन् ।
सबै कुरा त्यतिबेला समस्यामा पर्छ जब पति तथा उसका परिवार स्वयं कुनै पनि परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनन् यसका बाबजुद कि परिवारमा एक नयाँ सदस्यको आगमन भएको छ ।
प्रश्न उठ्छ, पत्नी र आमाबीचको सन्तुलन किन आवश्यक छ ?
पत्नी र आमाबीच सन्तुलन कायम हुन सकेन भने तपाईंलाई मात्र होइन परिवारमै समस्या र विघटनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले यसको समाधान गर्दै परिवारलाई अघि बढाउन सकेको खण्डमा मात्र परिवार सही रुपमा अगाडि बढेको हुन्छ ।
यदी कुनै पनि पतिले आफ्नी पत्नीलाई धेरै समय दिन्छ भने यो जायज हो । किनकी युवती पुरुषको जिन्दगीमा नयाँ आएकी हुन्छे र सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि यस्तो गर्न जरुरी पनि छ । युवतीले आफ्नो घर सम्बन्ध सबै छोडेर पतिको घरमा आएको अवस्थामा उसलाई पतिले धेरै समय दिनुलाई अन्यथाको रुपमा लिँदा समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नीसँग समय धेरै विताएको खण्डमा आमाले यस्तो रुपमा हेर्न हुँदैन कि उनले मेरो छोरोलाई खोसिरहेकी छिन् वा मबाट अलग गरिरहेकी छिन् ।
जब कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई सपोर्ट गर्न सुरु गर्छ तब परिवारमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न हुन्छ । केही मानिसले त्यसलाई ठूलो रुपमा लिन्छन् र खिसि ट्उिरी गर्न थाल्छन्, ‘त श्रीमतीको दास नै भइछस्’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आउन थाल्छ । जसमा आमाको मौन स्वीकारोक्ति हुन्छ । यसका लागि तपाईले आमालाई विवाहपछि नै खुलस्त भन्न जरुरी हुन्छ । विवाह गरेर नयाँ परिवेशमा आएकी बुहारीलाई केही साथ र समय नदिएको खण्डमा उसलाई असहज लाग्न सक्छ त्यसैले मैले उसका लागि केही सयम दिन्छु यसलाई अन्यथा नलिनु होला भन्ने खालको कुरा आमासँग पहिला नै गर्नुभयो भने आगामी दिनहरुमा समस्या देखिँदैनन् । होइन भने यसले पछि समस्या ल्याउन सक्छ ।
आमाका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । पुरुषले आफ्नी आमासँग समय विताउन तथा उनको हेरचाह गर्ने पूरा हक हुन्छ । आमासँग समय विताएको भन्दै पत्नीले पतिमाथि अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्दा परिवारमा कलह बढ्न जान्छ तसर्थ आमासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पत्नीसँग स्वतन्त्र राख्ने कोशिश गर्नुहोस् ।
समाजद्वारा उत्पन्न गरिएको प्रतिस्पर्धाको भावनाको कारण पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ कि, आमाको स्थान र पत्नीको स्थान अलग अलग हो ।
पत्नीले आमालाई धेरै समय दिएको वा आमाले भनेको मानेको र आमाले चाँहि श्रीमतीको मात्र सुनेको, हाम्रो वास्ता गर्दैनस् भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नुहोस् । तर यसलाई सम्बेदनशील रुपमा लिने गर्नुहोस् । आमालाई पनि सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस् र पत्नीलाई पारिवारिक संरचना बारे जानकारी गराउनुहोस् । पत्नीलाई आमाबुवामाथिको मर्यादा, हेरचाह र आमालाई बुहारीमाथिको माया,स्नेह, प्रेमको लागि प्रेरित गर्नुहोस् । आमा र पत्नीबीच बेलाबेलामा पर्ने समस्यालाई सँगै राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, जो सानो रुपमा नै समाधान गर्न सकियोस् ।
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७५, शनिबार ६ : ११ बजे